Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Socdaalka Xadidan ee Hawaii 2 Bilood oo Kale
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • Caafimaadka Warka • HITA • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • jiga • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Xayiraadaha safarka Hawaii
Tani waxay noqonaysaa mantra caadi ah oo ka socota Guddoomiyaha Hawaii David Ige ilaa dalxiisayaasha ka fikiraya inay jasiiradaha u yimaadaan fasax - Fadlan dib u dhig qorshayaasha safarkaaga.
Sida uu qabo Guddoomiyaha Gobolka Hawaii maanta, xeerarka socdaalku waxay sii jiri doonaan ugu yaraan laba bilood oo kale.
Hawaii waxay la halgameysaa tirooyin aad u sarreeya COVID-19 marka la eego kiisaska cusub iyo dhimashada sababta oo ah kala duwanaanshaha Delta ee aadka u faafa.
Kuwa weli yimaada Hawaii, waa inay muujiyaan caddeyn tallaal ama natiijo tijaabo COVID ah 72 saacadood gudahood markay yimaadeen Hawaii ama la kulmaan karantiil 10 maalmood ah.
Guddoomiyuhu wuxuu qabtaa shir jaraa'id oo toddobaadle ah Aloha Gobolka, iyo dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay, codsigiisu isku mid buu ahaa - weydiisanaya dalxiisayaasha inay sugaan ilaa waqti dambe si ay u booqdaan Hawaii.
Haatan Hawaii waxay leedahay amarro degdeg ah si loo habeeyo sida safarka loo sameeyo marka aad tagayso Hawaii, iyo Guddoomiyaha maanta, xeerarkaasi waxay sii jiri doonaan ugu yaraan laba bilood oo kale.
Hawaii waxay la halgameysay tirooyin aad u sarreeya COVID-19 marka la eego kiisaska cusub iyo dhimashada, dhammaantoodna waxaa sabab u ah kala duwanaanshaha Delta oo aad u faafa. Maaha wax aan caadi ahayn in la arko tirooyinka laba-tirada ah ee la tirinayo hal maalin gudaheed. Guriga meydka ee Honolulu wuxuu ku qasbanaaday inuu dhigo 3 weel oo qaboojiyeyaal ah hantida si loo dejiyo tirada meydadka la qaabilay iyo sidoo kale in lagu daro kuwa ka soo gudbay COVID, oo hadda badankoodu yihiin.
Guddoomiye Ige wuxuu sharraxay in celceliska toddobada maalmood ee kiisaska maalinlaha ah ee cusubi uu weli ka sarreeyo 300. Tirooyinku si cabsi leh ayay uga sarreeyaan markii COVID-19 uu markii ugu horreysay soo baxay. Hal dhibic bishii Ogosto ee sannadkan, waxaa jiray ku dhawaad ​​900 oo kiis oo cusub oo laga diiwaan geliyey Hawaii hal maalin gudaheed.
Tan iyo markaas, Hawaii waxay xukuntay tirada dadka ku kulmi kara hal meel iyo sidoo kale inta laga cuno hal goob hal mar. Dalxiisayaasha, tani waxay ka dhigan tahay safaf dhaadheer oo maqaayadaha ah, iyo meelo badan oo cuntada bixiya ayaa sidaas u samaynaya oo kaliya soo qaadista.
Badhasaabka Gobolka Hawaii Josh Green, oo sidoo kale ah dhakhtar ER, ayaa isha gorgorka ku daawanayay nambarada isbitaalka. Wuxuu si dhakhso leh u tilmaamayaa in inta badan isbitaallada hadda la dhigo bukaannada COVID, ay yihiin kuwa aan la tallaalin. Xogta ayaa muujineysa in ku dhawaad ​​90% dadka u baahan daaweynta isbitaalka ee COVID aysan helin wax tallaal ah, boqolleydaasna ay sii ahaato mid joogto ah maalinba maalinta ka dambeysa.
Hadda, xirashada maaskaro waa qasab meelaha dadweynaha ee gudaha ah, iyo xitaa in la galo goob cunto haddii la cuno ama si fudud loo soo qaato, waa in qofku muujiyaa kaarka tallaalka oo dhammaystiran si uu sidaas u sameeyo.
In kasta oo xaqiiqda ah in Hawaii ay ku dhowdahay heerkii tallaalka ee aadka loo tixgeliyey 70% si loo gaaro maskaxda lo'da - oo hadda ah 68% - Guddoomiyuhu mar dambe uma arko ka gudbidda marinkan inuu yahay calaamad u ah dabcinta xannibaadaha. Kala duwanaanshaha Delta ee dabeecadda aadka u faafa waxay ka dhigaysaa in hadafkii halbeegga ahaa mid hadda la dayacay.
Walaaca ugu weyn ayaa ah shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo isbitaallada kuwaas oo fidsan xaalado caadi ah oo galaya sanadka labaad. Shaqaaluhu aad bay u shaqaynayaan oo tirooyinka sariiraha u bannaan bukaannada COVID waa in si joogto ah loola socdaa si isbitaalladu ay weli u aqbalaan noocyada kale ee bukaannada u baahan daryeel caafimaad.
Kuwa weli go'aansada inay u safraan Hawaii, waa inay tusaan caddaynta tallaalka ama natiijada baaritaanka COVID ee taban 72 saacadood gudahood markay yimaadaan Hawaii ama 10 maalmood oo karantiil ah ayaa lagu soo rogi doonaa.
Rochelle Shankle wuxuu leeyahay,
Oktoobar 4, 2021 at 18: 34
"Maskaxda adhiga" huh? Kani ma sibidhka Freudian baa? Kaalay tifaftirayaasha, si ka wanaagsan ayaan wax u qaban karnaa.
Cheryl wuxuu leeyahay,
Oktoobar 4, 2021 at 06: 11
Anigu waxaan ahay degane Hawaii inta aan ogahay, macaamiisha kaliya ee ka qaata amarrada maqaayadaha MA aha inay muujiyaan kaarka tallaalka ama natiijooyinka baaritaanka taban.
Taasi waxay khuseysaa oo kaliya in lagu casheeyo martida.
Waxaan ka shaqeeyaa dukaanka raashinka anigoo wata macmacaan sidoo kale waxaan sameeyaa raashin raashin & gaarsiinta cuntada.